iPad iCloud ndabere aghụghọ ị na-agaghị achọ uche
iCloud bụ elu-ụbọchị collection nke Apple na ígwé ojii Mgbakọ ọrụ. iCloud e eze mara ọkwa na 6 June 2011.
iCloud ohere ọrụ na-echekwa music, photos, videos, ncheta, kọntaktị, backups, iBooks, na ngwa ma na-enye a ikpo okwu maka Apple si email sava. Ọ bụ ihe dị mfe ọrụ nke na-eme gị niile ngwaọrụ na mmekọrịta. Ị nwere ike ịkekọrịta ihe ọ bụla site na nke a ọrụ n'etiti ihe iPhone, iPod, iPad na Mac. Ozi na niile ngwaọrụ na-akpaghị aka na-akọrọ na ọ na-arụ ọrụ kpam kpam na-enweghị pụrụ iche edinam achọrọ site na onye ọrụ.
Kwado iCloud ndabere na iPad
Aka iCloud na ngwaọrụ gị ị ga-n'aka na ngwaọrụ gị na-agba ọsọ na ọhụrụ version nke iOS. Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị na-adịghị ọhụrụ version nke iOS karịa mbụ ị kwesịrị ị na imelite version nke ngwaọrụ gị mgbe ọ na-eso ndị a iji nwee iCloud na gị iPad ma ọ bụ ngwaọrụ.
1. Gaa Setting menu
2. enweta na iCloud
Mgbe gị na ngwaọrụ e emelitere site ọhụrụ version nke iOS karịa soro ntuziaka ka rụọ ọrụ iCloud na ngwaọrụ gị.
3. Pịa na nhọrọ nke ndabere
4. na-atụgharị na nhọrọ nke iCloud ndabere ka e gosiri n'elu na foto a.
iCloud na ngwaọrụ gị ga-nyeere na iCloud ga-akpaghị aka ndabere gị data kwa awa 24 ma ọ bụ otú ahụ, dị ka ogologo oge ngwaọrụ gị na jikọọ na Wi-Fi ma ọ bụ ejikọrọ na-ana. Ukwuu n'ime ya mere mgbe ị na-ehi ụra. Ọ bụrụ na ị na mgbe kwadoo ka iCloud tupu, akpa ndabere nwere ike na-a mgbe. Mgbe ahụ, iCloud ga na-bulite mgbanwe ị na-mere kemgbe ikpeazụ ndabere nke bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa. Ihe niile na ngwaọrụ gị ga-akpaghị aka ga synced na i nwere ike ịkọrọ ozi ọ bụla gị ọ bụla Apple ngwaọrụ.
Jikwaa iCloud Backups
iCloud ndabere bụ ihe idealize azịza karịa syncing na iTunes dị ka ọ na-adị na-akpaghị aka mgbe ọ bụla gị na ngwaọrụ na jikọọ na a Wi-Fi na netwọk. Ọrụ na onye-enyi na enyi, ma e nwere bụ ole na ole nke nchekwa, ọrụ akwado a otutu stof, ma ọ bụ ọrụ na otutu-ngwaọrụ, nwere ike ịhụ ha iCloud nchekwa na-ngwa ngwa jupụtara elu. Iji jikwaa iCloud backups ha bụ nanị bara uru mgbe backups bụ akpaka na mere mgbe nile. The iOS ngwaọrụ ga nche ndị ọrụ ha na iCloud Nchekwa bụ kpam kpam zuru, ma ijikwa iCloud nchekwa nwere ike ịbụ a siri ike usoro. Ebe a ugbu a, ị ga-eduzi otú ka afọ ju onwe gị na ngwaọrụ gị na-ịlụ kwadoo mgbe nile, jikwaa iCloud nchekwa ntọala.
Iji malite, ịnyagharịa Ntọala ngwa gị iOS Ngwaọrụ na pịa ma ọ bụ kpatụ na iCloud.
Jikwaa gị iCloud ohere, enweta na na nchekwa.
Ị ga-ahụ ngụkọta Nchekwa ekenye iCloud ohere ị na-tụrụ ụtụ ugbu a. Ọ bụrụ na ndị dị nchekwa bụ erughị 10 GB ị ga-akacha nwere ihe isi ike na-akwado gị ngwaọrụ. Iji nweta nkwalite, Kpatụ na ịgbanwe Nchekwa Plan nhọrọ. Nke a bụ ozi ọma na ugbu a atụmatụ na-gbara ụgwọ kwa ọnwa kama kwa afọ dị ka ha nọ n'ihu. The 200 GB nchekwa atụmatụ ga-ejupụta bụrụ na ị na n'otu n'otu banyere na ngwaọrụ gị nkwado ndabere na mpaghara ngwaọrụ gị niile.
Mgbe ya, enweta na Jikwaa Nchekwa nhọrọ na ị ga-ahụ faịlụ na backups na-eji gị iCloud ohere. Ị ga-achọpụta na photos na-ewere ọtụtụ ohere nke iCloud. N'okpuru ebe na ị ga-ahụ nke ngwaọrụ backups na-ugbu a zọpụta na ego nke nchekwa na-iwere site ọ bụla ngwa n'otu n'otu.
Ilaghachi isi na peeji nke Jikwaa iCloud Nchekwa ihuenyo, ọrụ-aga na iCloud Photo Library na ihichapụ foto niile si ígwé ojii. Nke a ga-mere naanị ma ọ bụrụ na ị bụ n'aka banyere photos na-azọpụta ebe ọzọ na kwadoo on ngwaọrụ ọzọ. Ị ga-enwe ụbọchị 30 mgbe ị ihichapụ gị faịlụ nkwado ndabere na mpaghara tupu Apple ewepu ndị na foto ruo mgbe ebighị ebi.
Mgbe i jisiri nchekwa nhọrọ, ị kwesịrị ị ego na iCloud ndabere bụ na na nwere na-adịbeghị anya ịzọpụta. Soro ntuziaka nyere n'elu na-amalite azụ elu.
Naghachi data si iCloud ndabere selectively
Wondershare Dr. Fone maka iOS bụ ụwa mbụ ọmụma gbakee mmemme maka Apple ngwaọrụ. Ọ bụ tinye n'ọrụ recoup na-ehichapụ kọntaktị, nzi ozi, foto, na ndetu, olu mmelite, Safari Ibe edokwubara na ndị ọzọ si iPhone, iPad na iPod aka. Ndị ọzọ karịa agbake ọmụma nnennen nnennen si iPhone, iPad na iPod aka, ọ N'otu aka ahụ kwe gị ka ị naghachi ọmụma si iCloud na iTunes backups selectively. Ọ bụ kpam kpam zuru okè na ndị na-adịbeghị anya iOS 9, iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPad Air 2 na ọtụtụ dị iche iche Ngwa nke Apple.
Pịa Download button na-Free Ikpe nke Wondershare Dr.Fone maka iOS.
Naghachi Data si iCloud maka ihe ọ bụla iOS Ngwaọrụ
E nwere isi 3 isi iji gbakee furu efu ma ọ ehichapu ọmụma si iCloud site Dr. Fone maka iOS
1. mbụ-agba ọsọ ahụ Wondershare Dr.Fone maka iOS, bulie mgbake usoro nke naputa site na iCloud ndabere faịlụ n'elu. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ na windo. Tinye iCloud akaụntụ na nzuzo isi nbanye.
2. Mgbe ị banyere n'ime iCloud, ngo nwere ike ịchọpụta ihe iCloud backups na akaụntụ gị. Bulie otu ebe ị na-aga na-agbake ọmụma na enweta na Download iji nweta ya ebudatara.
3. iṅomi ọmụma. Mmepụta ga-okokụre obere oge. Mgbe ọ na-akwụsị, ị nwere ike ihuchalu ozi niile dị na gị iCloud ndabere. Lelee ha otu otu na tinye akara ihe ị chọrọ. Na mgbe ahụ mgbata na Naghachi catch ihapu ha na gị na PC na otu akọrọ. Mgbe ahụ data ị chọrọ bụ gbakee.
> Resource> iCloud> iPad iCloud ndabere Aghụghọ Ị ga-achọghị Miss